19 hayayaashii loox qaybinta Buur fiber optic
19 hayayaashii Buur jir fiber optic-qaybinta ,1U-24-SC, cayimay in lagu rakibo 19 armaajooyinka inch shabakadaha fiber optic isgaarsiinta, qolalka qalabka CATV iyo qolka qalabka network.
ODF 19 dhigeysa buurta ka caawisaa in ay ku xidhmaan fiilooyinka indhaha, sii soco, iyo maamulka cable ku haboon, taas oo bixiso ilaalinta lagu kalsoonaan karo oo muddo dheer ka mid ah isticmaalka shabakadaha FTTX.
ODF 1U-24-SC meel kartaa ilaa 24 ka mid ah fiber xidhiidhada muhiimka ah ee saldhiga ku saabsan noocyada SC joogto ah / APC, LC / dabaq, SC / UPC xadhko jaan iyo adapters fiber optic ah.
24 dekedaha ee darfahoodii balastar fiber optic waxaa laga heli karaa kala duwan Jera ee wax soo saarka fo la adapters pre-soo ururay oo sidoo kale.
oo dhumucdiisuna waxay wax
Fiber Optic Meegaarka Qaybinta (ODF) Waayo, 19 "hayayaashii steel Mount, 1U-12-SC la sameeyey, rinji by gaar ah, kaas oo dammaanad muddo dheer ah isticmaalka gudaha iyo qaboojinta. nooca Golaha Wasiirada ku-dhajinta rakibo waxaa loo sameeyaa by 4 boolal galvanized. ODF 1U-24-SC ayaa 12 saxaarad fiber waayo dhuumaha shrinkable kulaylka.
Tani 19 hayayaashii Buur Frames fiber Qaybinta indhaha leeyahay 3 adapters isbedel faceplates haysta, si ay uga faa'ideysan SC iyo Xidhiidhiyayaasha FC qor haddii loo baahdo.
Jera bixisaa kala duwan oo soo saarka ugu dhamayska tiran ee accessories network indhaha dadban, dhismaha shabakad sida ay technology FTTX. Accessories sida: Fiber Optic Pigtail ,Fiber Optic adabtarada ,gacmo ilaalinta Heat splice shrinkable ,Fiber Optic Patch Cord ,Fiber dhibcood optic ,Fiber indhaha Splice xiritaanka , FTTH dejinta clamps ,Down clamps hogaanka,band bir iyo buckles , xiisad clamps ,dejinta clamps cable , pole brackets, dayada iyo joojinta clamps ,debcin cable kaydinta
Waxaan bixinaa ugu dhameystirtay qayb indhaha dadban codsiyada FTTX heerka sare ee modularity iyo scalability.
Ku soo dhawow oo nala soo xiriir!
Next: madaxa bool xiirid luguhu CLBV 25-50
19 armaajooyinka inch
19 hayayaashii Buur fiber indhaha Frames Qaybinta
19 '' dhigeysa Buur jir fiber optic-qaybinta
dayada iyo joojinta clamps
maamulka cable ku haboon
debcin cable kaydinta
dejinta clamps cable
xidhiidhada fiber core
fiber optic darfaha balastar
Fiber dhibcood optic
Fiber indhaha Splice xiritaanka
FTTH dejinta clamps
gacmo ilaalinta Heat splice shrinkable
shabakadaha fiber optic isgaarsiinta
band bir iyo buckles